Umbuzo: Ingaba ukubaleka kundinceda ukukhwela ibhayisekile yam-BikeHike
Ingaba ukubaleka kuyenzakala ukwenza ibhayisekile?
Ngaba abakhweli beebhayisikile kufuneka babaleke?
Kufuneka ukubaleka kangakanani umkhweli webhayisikile?
Ngaba kufuneka ndibaleke phambi okanye emva kokukhwela ibhayisekile?
Ngaba ndingakwazi ukubaleka kwaye ndiqhube ibhayisekile kwangolo suku olunye?
Kutheni abakhweli beebhayisikile bengakwazi ukubaleka?
Kutheni kunzima kangaka ukubaleka emva kokukhwela ibhayisekile?
Ngaba kubi ukubaleka emva kokukhwela ibhayisekile?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile okanye ukubaleka ngcono ukomelela?
Ukukhwela ibhayisekile kuza kuwutshintsha njani umzimba wam?
Ngaba kulungile ukujikeleza emva kokuzilolonga?
Kufuneka ndihambe ngebhayisekile ixesha elingakanani ukuze ndizilolonge kakuhle?
Ngaba abakhweli beebhayisikile balungile kuneembaleki?
Ngaba ungalahla amanqatha esisu ngokuhamba ngebhayisikile?
Ngaba ukubaleka nzima kunokukhwela ibhayisekile?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile okanye ukubaleka ngcono kwi-VO2 max?
Ngaba i-5 yemizuzu yemayile ilungile kwibhayisekile?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kukwenza imbaleki ecothayo?
Ingaba ukubaleka nokukhwela ibhayisekile zisebenzisa izihlunu ezifanayo?
Kutheni ukukhwela ibhayisekile kuvakala kulula kunokubaleka?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kwenza impundu yakho ibe nkulu?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kuyenza ibe mikhulu imilenze yakho?
Ngaba kulungile ukudibanisa ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kukunika i-abs?
Ngaba kungcono ukuqhuba ibhayisekile okanye ukubaleka kuqala?
Zingaphi iimayile zokuhamba ngebhayisekile ezilingana nokubaleka?
Ndingaziqeqeshela njani ibhayisekile nokubaleka?
Ngaba ukukhwela ibhayisekile kunzima kunokubaleka?
Ukonyuka kwe-Cardiovascular, Amandla e-Muscular and Exercise Tolerance. Ukongeza kuxinaniso olukhulu lwamathambo, ukubaleka njengomsebenzi woqeqesho olunqamlezayo kunokubonelela ngamava e-aerobic ahluke ngokupheleleyo kumkhweli webhayisikile, okukhokelela ekwandiseni amandla kunye nokunyamezela kwemisipha.
Xa uqhuba, umonakalo we-fiber muscle owenzekayo mkhulu kakhulu kunomonakalo owenzekayo xa ukhwele ibhayisekile. Ke, iseshoni yokubaleka ye-aerobic yeeyure ezimbini iya kuba luxinzelelo olukhulu kakhulu kumzimba wakho kuneseshini yoqeqesho lwe-aerobic yeeyure ezimbini kwibhayisekile.
Emva kwekhefu elifutshane lokuphela kwexesha, ngeendlela zonke zibandakanya ukugijima kulawulo lwakho lokufaneleka ebusika. Ngexesha loqeqesho 'lwemeko eqhelekileyo' akukhathaliseki ukuba uhlala usempilweni kangakanani na logama usenzayo, kwaye ngale ndlela ukubaleka kunokunceda ukukhwela ibhayisekile.
Kuya kufuneka usebenze ukuya kuthi ga kwithuba lokubaleka imizuzu engama-30 ngokukhululeka, ngaphandle kokuziva uba buhlungu kakhulu ngosuku olulandelayo. Ezinye izinto ezichaphazela ukunyamezela komzimba ekubalekeni ziquka: Ixesha (Lilonke ixesha elichithwe uqeqesho) Indlela (Iintlobo zoqeqesho ezisetyenzisiweyo).
Impendulo emfutshane efunwa ngumntu wonke inokufinyezwa. Ukuba ufuna ukwakha izihlunu, baleka kuqala. Ukuba ufuna ukwakha unyamezelo lwakho kunye nomthamo we-aerobic, baleka okokugqibela. Ngokusisiseko, impendulo yomzimba wakho eguquguqukayo inkulu kuhlobo lomthambo owugqibayo ukwenza umsebenzi wakho.
Qaphela ukuba iya kuba yinzuzo enkulu ye-cardio kune-muscular. Ukwenza zombini ngemini enye kufuneka kube kuhle logama nje uzinika ukuchacha okwaneleyo.
Ukuhamba ngebhayisekile kwakha izihlunu ongazisebenzisi kangako xa ubaleka, ngaloo ndlela kuthintela iicramps kunye nokwenzakala, kwaye ukubaleka kwakha izihlunu ezingasoloko zisetyenziswa xa kukhwela ibhayisekile, ezibizwa ngokuba ziihamstrings. Zombini zinegalelo kwi-cardio yakho, kodwa ndicinga ukuba ukubaleka ungabaleka ngokuzilolonga okufutshane kakhulu (i-cardio-wise) kunokuba unako ngebhayisekile.
Inqaku linjengoko usuka kwibhayisikile ukuya ekuqhubeni izihlunu eziza kudlala zidinga ixesha lokuziqhelanisa nentshukumo entsha kunye noxinzelelo olubekwe phezu kwabo. Yiyo loo nto uhlala uqaqanjelwa kwiiveki ezimbini zokuqala zokubaleka, kwaye umkhondo wakho / uhlobo lokubaleka luziva lungasebenzi kakuhle.
Kuqeqesho, unokhetho. Wonke umntu uyavuma ukuba abadlali abathathu kufuneka babaleke emva kokukhwela ibhayisekile ngendlela yokulungiselela ukwenza okufanayo kugqatso, kodwa kukwakho nemvumelwano yokuba akuyomfuneko ukubaleka emva kohambo ngalunye.
Ukuhamba ngebhayisikile ngumdlalo onempembelelo ephantsi onceda ukwakha unyamezelo kunye namandla. Xa kuthelekiswa nokubaleka, kulula ukwakha nokugcina amandla ngelixa uhamba ngebhayisikile kuba ukuqaqamba kwemisipha kunye nomonakalo kulibaziseka ngenxa yempembelelo ephantsi.
Khwela kuqala xa unogqatso oluzayo. “Xa ukuzilolonga ngebhayisekile kuyeyona nto iphambili kuwe, okunye ukuzilolonga kufuneka kuxhase impumelelo yakho yokukhwela ibhayisekile,” utshilo uHammond. Oko kuthetha-uqikelele-kufuneka ukhwele kuqala ukuba ufuna ukwenza iiseshini zakho ze-cardio kunye namandla ngosuku olufanayo.
Cwangcisa ukukhwela ibhayisekile yakho kwaye ukhwele imizuzu engama-30-60, iintsuku ezi-3-5 ngeveki. Qala lonke uhambo ngokufudumeza. I-Pedal ngesantya esicothayo, esilula kwimizuzu emi-5-10. Emva koko yongeza isantya sakho ukuze uqalise ukubila.
Ukuba ubaleke kwaye ukhwele ibhayisekile ngexesha elifanayo, ukubaleka kuya kungqina ukuba sesona sitshisi sekhalori esikhulu. Uhleli phantsi ngelixa uhamba ngebhayisekile, emva kwayo yonke loo nto. Umkhweli webhayisikile utshisa malunga ne-3,500-4,500 yeekhalori kwinqanaba ngalinye lokhenketho (ngokuqhelekileyo malunga neeyure ezintlanu okanye ezintandathu), ngelixa i-marathoner iya kutshisa malunga ne-3,000 kugqatso olunye.
Ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile zizinto zakudala zokuzilibazisa kunye nokuzilolonga okonwatyelwa ngabantu kwihlabathi jikelele. Ngokubanzi, ukubaleka kutshisa iikhalori ezininzi kunokuhamba ngebhayisikile. Kodwa kwakhona impembelelo ephezulu kwaye inzima kwizihlunu kunye namalungu.
Njengoko ukuqina kwakho kwe-cardiorespiratory fitness (VO2 max) kuphucula, ipesenti ephantsi yomthamo wakho wangaphakathi womsebenzi uyafuneka ukuvelisa inani elifanayo leewatts. Ukuba ungumkhweli webhayisikile kunye nembaleki esebenzayo, uya kuqaphela ukuba unomthamo omnye we-VO2 wokukhwela ibhayisekile kunye okufanayo kodwa okwahluke kancinane kwexabiso eliphezulu le-VO2 lokuqhuba.
Ixesha eliqhelekileyo lokuhamba ngebhayisikili ngemayile yimizuzu emithathu ukuya kwemine. I-17 ukuya kwi-18mph ngumndilili wesantya sokuhamba ngebhayisikile somntu osempilweni oqhuba ibhayisekile enebhayisekile esemgangathweni ophucukileyo kwindawo ethe tyaba nakwindawo.
Ukukhwela ibhayisekile akukuncedi ukubaleka ngokukhawuleza. Ukuze ube yimbaleki ekhawulezayo, kufuneka uziqeqeshe ngokubaleka. Ukongeza ibhayisekile kwirejimeni yakho yoqeqesho ayizukukunceda ukuba ufikelele kumaxesha obaleka ngokukhawuleza, nangona inokusetyenziswa njengesixhobo esisebenzayo soqeqesho olunqamlezayo ukuba isetyenziswe ngokufanelekileyo.
Zombini ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile zisebenzisa i-quadriceps kunye ne-hamstrings, izihlunu zethanga ezisebenzisanayo zangaphezulu nasemva. I-quads yakho iphakamisa umlenze umgama xa ubaleka okanye ujikeleze ukujikeleza xa uhamba ngebhayisikile, ngelixa i-hamstrings yakho idonsa umlenze phantsi. Xa ubaleka, izihlunu zamathanga zezona zihlunu eziphambili.
Ngokusisiseko, ngelixa imilenze yakho yomelele ngakumbi kunokuba kufuneka ihambe okanye ibaleke, isasebenzisa izihlunu ezininzi kunokuhamba ngebhayisekile. Iibhayisekile, ngokuqinisekileyo, 'zinonxweme' (okt xa ukhwele ukwehla), nto leyo eyakwenza ukuba ubaleke ngesantya esingaguqukiyo ngaphandle kokufuna ukugcina umgangatho ophezulu womgudu womzimba.
Ukuhamba ngebhayisekile akusayi kukunika i-butt enkulu, kodwa kunokukunika ukumila ngakumbi ngenxa yeenzuzo zayo ze-cardio kunye ne-muscle-building. Nangona kunjalo, ukuba ukhwela rhoqo ngesantya esinzima kunye nokuchasana, uya kubona i-tush eyomeleleyo - kunye neenzuzo zempilo ezihamba nayo, kubandakanywa intlungu encinci ye-hip, idolo kunye ne-ankle.
Ukuphucula ukusebenza Ukukhwela ibhayisekile kunceda ukuphucula ukusebenza ngokuphuhlisa ukomelela, amandla kunye nokunyamezela ngaphandle kokonakalisa imisipha yomlenze wakho. Yimpembelelo enkulu ephantsi yokuzivocavoca kwentliziyo kwaye ngokuyongeza kulawulo lwakho loqeqesho lweveki kuya kukunceda wenze ngakumbi ngoxinzelelo oluncinci emzimbeni wakho.
Ukuhamba ngebhayisekile ayakhi i-abs yakho ngokuthe ngqo, kodwa kunokukunceda ukuveza i-abs yakho ukuba idityaniswe nokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca okongeziweyo. Ukukhwela ibhayisekile kunceda ukukrazula amanqatha agquma i-abs yakho.
Ukubaleka kutshisa iikhalori ezininzi kunokuhamba ngebhayisekile kwaye kukwathembekile kwizihlunu ze-toning, ngoko ke ngokwethiyori, kunokuphucula ukomelela kwakho ngakumbi. Ukufumana uninzi lwemisebenzi yomibini, thatha ukukhwela ibhayisekile kuqala kwaye emva koko ubaleke, unciphise ukuba ungadlulanga kwi-10 yepesenti yomgama owukhweleyo xa uqala ukuqalisa.
Umgaqo jikelele wesithupha ngu-1: 3 okanye 1: 2 ukubaleka kwi-bike ratio kwiimayile. Ngamanye amazwi, i-1 yeekhilomitha zokugijima kwinqanaba eliphakathi lilingana nokuhamba ngebhayisikili 2-3 yeekhilomitha kwinqanaba elifanayo lomgudu. Ukubaleka ngumsebenzi onempembelelo ephezulu kwaye kufuna umzimba wonke ukuba ushukume.
Nazi iindlela ezintathu zokudibanisa ukukhwela ibhayisekile kunye nokubaleka kwisicwangciso soqeqesho sasehlotyeni esimnandi: Qeqesha ngamandla xa ubaleka kwaye ululame kwibhayisekile. Ukuba uyimbaleki eqeqeshelwa umgudu onzima oquka ukubaleka ixesha elide, isantya esiphezulu, itempo ebalekayo, kunye nokusebenza kweenduli, unokulukwa kwiindlela ezimbini ezilula zokusebenzisa ibhayisekile ngeveki.
Kunzima kakhulu-amalungu akho kunye nezihlunu kufuneka zisebenze nzima kakhulu ngexesha lokubaleka. Kwibhayisekile, ubunzima bomzimba wakho buxhaswa yisali kwaye ibhayisekile yakho ikunceda ekukuqhubeleni phambili. Kum, kuvakala ngathi ukubaleka kweyure enye kufana nobuncinci iiyure ezimbini kwibhayisekile.
Ngaba iBhayisekile iyakunceda ukubaleka
Umbuzo: Ngaba Ukukhwela ibhayisekile kuyanceda ekubalekeni
Ngaba ukubaleka kuyanceda ukunyamezela ukukhwela ibhayisekile
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ukuBhayiseka kuyanceda ukubaleka iReddit
Ngaba ukubaleka kuyakunceda kwiBhayisekile yakho
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ukuBhayiseka kuyanceda ukubaleka ukunyamezela
Ngaba ukubaleka kuNcedisa ukuHamba ngeBhayisikile eNdleleni
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iBhayisekile iyanceda ngokuBaleka uQoqosho
Ngaba iBhayisekile yangaphakathi iyanceda ngokubaleka
Ngaba ukuHamba ngeBhayisikile kukuNcedisa ukubaleka ngokukhawuleza
Umbuzo: Ngaba ukuQhuba ibhayisekile kuyakunceda ukuba ubaleke ngcono
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ukuQhuba ibhayisekile kuyakunceda ukuba ubaleke ngokukhawuleza